ဖေဖေ . . . ဖြေပါ | The World Today Magazine
ဖေဖေ . . . ဖြေပါ
““ဖဖေေ… တိုငျးရငျးသားဆိုတာ ဘာလဲ””
ရုံးကအပွနျ အိမျရောကျပွီး ညစာအတှကျ ဟငျးခကျြနတေုနျး မီးဖိုခြောငျထဲ ရောကျလာပွီး မေးလာသော သားတျောမောငျ၏ မေး­­ခှနျးကွောငျ့ခေါငျးနားပနျးကွီး သှားမိသညျ။ သားတျောမောငျက ယခုနှဈမှသူငယျတနျး ( KG) စတကျသညျ့ အသကျ ၅နှဈကြျော အရှယျဖွဈသညျ။ ကြောငျးတှငျ သငျပေးလိုကျသညျ့ သငျခနျးစာ၊ လလေ့ာ စရာမြားအနကျ သူထပျမံသိလိုသညျ့ အကွောငျးအရာတှေ၊ အပွငျအပတှငျ စူးစမျးလလေ့ာရငျး သူထပျမံနားလညျ လိုသညျ့ အကွောငျးအရာတှရှေိပါက ယခုလိုပငျ ကြှနျတေျာ့ကို အမွဲမေးခှနျး ထုတျလရှေိ့သညျ။ တဈခါတလေ မေး ခှနျးမြားကလှယျသျောလညျး ဖွရေသူအတှကျက ဖွရေခကျ ခေါငျးခဲရသညျ့ ကိစ်ျစမြားလညျး မနညျးပေ။ ယခုလညျး ဘယျကဘယျလို ကွားသိလာသညျမသိ … အမေးတျောရှိလာခဲ့လပွေီ။ ယခုလို မေးခှနျးမြိုးက အဖွမေတတျလြှငျ ကလေးစိတျထဲ အယူစှဲနှငျ့ အသိအမှားမြိုး ဝငျသှားနိုငျသညျမို့ ဘယျလိုအဖွမြေိုးပေးရမလဲဟု အတေျာ့ကို စဉျးစား ရသညျ။
““ဖဖေေ… တိုငျးရငျးသားဆိုတာ ဘာလဲ၊ ပွောပွပါ။””
သူ့ကိုအဖွမေပေးတော့ စိတျမရှညျ ဟနျဖွငျ့ သားတျောမောငျက ထပျမေးလာသညျ။
““တိုငျးရငျးသားဆိုတာ ကခငျြ၊ ကယား၊ ကရငျ၊ ခငျြး၊ ဗမာ၊ မှနျ၊ ရခိုငျ၊ ရှမျးပေါ့ သားရဲ့။””
ကြှနျတေျာ့အဖွကွေားတော့ သားတျောမောငျ နညျးနညျးစဉျးစားသှားဟနျရှိသညျ။ ယခငျဆိုဆကျတိုကျ ခကျြခငျြး နောကျဆကျတှဲမေးခှနျးတှေ တရစပျမေးတတျသျောလညျး ယခုတဈခါတော့ အနညျးငယျ တုံ့ဆိုငျးသှား သညျ။ ကြှနျတျောလညျး မသိသလိုဟနျဆောငျရငျး ခကျြလကျစဟငျးကို ဆကျခကျြနမေိသညျ။ သို့သျော သား တျောမောငျ ခတ်ေတတုံ့ဆိုငျးသှားမှုက မုနျတိုငျးမလာမီ လငွေိမျနခွေငျးမြိုးဆိုတာ ကို မတှေးခဲ့မိခွငျးက ကြှနျတေျာ့ အမှားပငျ။
““ဖဖေေ.. သားသားတို့ကဘာလဲ။ ဘာတိုငျးရငျးသားလဲ””
““ဖဖေတေို့က ဗမာတိုငျးရငျးသားပေါ့ … သားရဲ့။ ဗမာဆိုတာကလညျး တိုငျး ရငျးသားတဈမြိုးပဲလေ””
““ရှငျကလညျး ကလေးကို မဟုတျတာ တှလြှေောကျပွောနပွေနျပွီ။””
ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျ အမေးအဖွကေို နားထောငျနသေညျ့အိမျသူက သားတျောမောငျကို ကြှနျတျော ပေးလိုကျသညျ့ အဖွကေို မကနြေပျဟနျဖွငျ့ ဝငျ ပွောလာသညျ။
““ကလေးကို အမှနျအတိုငျးပဲ ပွောရမယျလေ။ ဒါမှ သူမှနျမှနျကနျကနျ နားလညျမှာပေါ့။ ဒါက လကျလှတျ စ ပယျဖွလေို့မရဘူးလေ။””
အိမျသူနားလညျအောငျ ကြှနျတျောရှငျးပွရသညျ။ ဒီအရှယျကတညျးက ကြှနျတျောတို့ မြိုးဆကျကို ကြှနျ တျောတို့အမှနျ သိစိတျကို မြိုးစခေ့ပြေးရနျ လိုအပျသညျဟု ကြှနျတျောကယူဆထားသညျ။
သားတျောမောငျက ထပျမေးလာသညျ။ သားတျောမောငျက သူသိခငျြတာကို မနားတမျးမေးတတျသညျ။ တဈခါတလေ တျောတျောလေးရှငျးပွရခကျသညျ။ ဥပမာ- ““ခခှေးကို မွနျမာလို ဘယျလိုချေါလဲ ဖဖေေ”” ဆိုတာမြိုးဖွဈသညျ။ နားလညျအောငျ မနညျးရှငျးပွရသညျ။ ခုလညျး ဗမာနိုငျငံဆိုတာ ဘာလဲ မေးလာပွနျသညျ။
““ဗမာနိုငျငံဆိုတာဖဖေတေို့ ခုနတေဲ့ နိုငျငံကိုချေါတာပေါ့ သားရဲ့။””
““အတူတူပဲလသေား၊ သားသားကွိုကျ သလိုချေါပေါ့။””
““မတူပါဘူး။ ဗမာက B နဲ့ပေါငျးတာ လေ။ ဟိုဟာက M နဲ့ပေါငျးတာ၊ မတူပါဘူး။””
““ပဈရငျမိုးပျေါထောငျမပဈဘူး။ တညျ့တညျ့မှနျအောငျ ပဈတယျ””ဆိုသညျ့ ပုဂ်ျဂိုလျကွီး အစပွုခဲ့သညျ့ ပွဿ နာက ယခုကိုယျ့ အိမျထဲကကိုယျ့သားတျောမောငျထိပါ ရောကျလာနခေဲ့ပွီဖွဈသညျ။ ကမ်ျဘာကြျော ကဗြာဆရာ တဈဦး၏ စကားတဈခုမှတျသား ခဲ့ဖူးသညျ။ နှငျးဆီကို မညျသို့နာမညျပေးပေး နှငျးဆီသညျ နှငျးဆီဟု ဆိုသညျ။ မူလရှိ ရငျးစှဲအဓိပ်ျပာယျကို စကားလုံးတှေ ပွောငျး လဲလိုကျရုံဖွငျ့ ပွောငျးလဲသှားမညျဟု ယူဆထငျမွငျကွသူတို့၏ အကြိုးဆကျက ယခုကိုယျ့အိမျထဲထိ ရောကျလာပွီး ကိုယျ့မြိုးဆကျထိ ရောကျလာနခေဲ့ပွီဖွဈသညျ။ သား တျော မောငျ ယခုလိုမေးတော့ မထငျမှတျဘဲ လှတျတျောထဲက စဈဘေးရှောငျဟုမချေါဘဲ တိုကျပှဲရှောငျဟုချေါရနျ အသိ ပေးခကျြကို ဖတျြခနဲသတိရရငျး ပွုံးမိသေးသညျ။ ကိုယျ့မြိုးဆကျ၏ အတှေးထဲကို ကြှနျတျောတို့ မလိုအပျတာတှေ မထညျ့မှ ဖွဈမညျ။
““ဖဖေေ …မေးနတေယျ၊ B နဲ့ M နဲ့မတူဘူးမို့လား။””
မေးတာကိုဖွရေနျ ကွနျ့ကွာနသေဖွငျ့ စိတျမရှညျသလို သားတျောမောငျက မေးလာသညျ။
““စာလုံးပေါငျးပဲမတူတာသားရဲ့၊ အဓိပ်ပာယျကအတူတူပဲလေ။ မမေကေို မမေလေို့ချေါသလို မာမီလို့လညျး ချေါ သလို ပေါ့သားရဲ့။””
““ဒါဆို… ရခိုငျ (R သံဖွငျ့အသံထှကျရငျးပွော)လညျး ရခိုငျ (ရကောကျသံဖွငျ့ အသံထှကျရငျး)နဲ့ အတူတူပဲလား။””
““အေးပေါ့… အတူတူပဲပေါ့ သားရဲ့။””
““ဖဖေေ… သားသားတို့က ဘာလို့တိုငျးရငျးသားလဲ၊ တခွားသူတှကေရော ဘာလို့ တိုငျးရငျးသားလဲ။””
““ဗုဒေ်ျဓါ””ဟုသာ ဘုရားတမိတော့သညျ။ သားတျောမောငျကို တခွားနာမညျပေးခဲ့မိ၍သာ တျောတော့၏။ မောငျလူအေးဟုသာ နာမညျပေးမိလြှငျ (ဆရာ)သိပ်ပံမောငျဝကို ရောကျရာအရပျက ပွနျချေါနိုငျရနျ ဟိုမွဈထဲခေါငျး လောငျးရှာသညျ့ အဖှဲ့ကို အကူအညီတောငျးခံရမညျ့ပုံပငျ ဖွဈသညျ။
““ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဖဖေတေို့အားလုံးက သူငယျခငျြးတှမေို့လို့ပေါ့သားရဲ့။ သားသားလညျး တိုငျးရငျးသား၊ သားသား သူငယျခငျြး တှလေညျးတိုငျးရငျးသား။ အားလုံးက သူငယျခငျြးတှပေေါ့ သားရဲ့။””
““တိုငျးရငျးသားတှကေ ဘယျမှာနတောလဲ ဖဖေေ။””
သားတျောမောငျသညျ တိုငျးရငျးသား ဆိုသညျကို သူသိထားသညျ့ National geo graphic ထဲက အ ကောငျတှေ သူ့နရောနှငျ့သူကငျြလညျ ကကျြစားနထေိုငျမှုမြိုးရှိသညျဟု ထငျမှတျထားပုံရသညျ။ ခကျ သညျက အိမျမှာလညျး မွနျမာပွညျမွပေုံ ဝယျယူခြိတျဆှဲထားခွငျးမရှိသညျမို့ တိုငျးရငျးသားတှေ မညျသို့ မညျပုံမညျသညျ့ နရောတှငျ နထေိုငျကွောငျးကို ရှငျးပွဖို့ ခကျနခေဲ့သညျ။ ဟငျးကလညျးခကျြရငျးတနျး လနျးမို့ ဘယျလိုရှငျးပွရမလဲ ကွံရာမရဖွဈနတေုနျး အတှေးပျေါလာသညျနှငျ့ ဂူဂဲလျကနမွေနျမာပွညျ မွပေုံဒေါငျးလုတျဆှဲပွီး တိုငျးရငျးသားတှေ နထေိုငျရာဒသေနှငျ့ သူတို့အမှီပွုရာအရပျတှကေို ပုံနှငျ့တကှပွရငျး ရှငျးပွလိုကျတော့ သားတျောမောငျ တျောတျော လေးကနြေပျသှားသညျ။ သို့သျော သားတျော မောငျကို တဈသမတျတညျး အယူစှဲဖွဈမသှားစလေိုတာကွောငျ့ ထပျမံရှငျးပွမိသညျ။
““ဒါတှကေ တိုငျးရငျးသားတှေ သူတို့မူလနတေဲ့ နရောတှပေေါ့သားရဲ့။ ဒါပမေယျ့ ဖဖေတေို့အားလုံးက တိုငျးရငျးသားတှလေေ။ ဖဖေတေို့နိုငျငံထဲမှာ နခေငျြတဲ့နရောကို သှားလာနထေိုငျလို့ ရတာပေါ့ သားရဲ့။””
ကြှနျတေျာ့အဖွကေိုကွားတော့ သားတျောမောငျက နညျးနညျးစဉျးစားသှားသညျ။ ပွီးတော့ မေးခှနျးတဈ ခုထပျမေးသညျ။ သားတျောမောငျ ထပျမေးသညျ့ မေးခှနျးကွားတော့ အံ့သွမှငျတကျသှားမိသညျ။ ထို့အတူ နှဈ ပေါငျးမြားစှာ ဝါဒမှိုငျးတှအေောကျ နဈမွုပျရငျး အမုနျးတရားမြားဖွငျ့ ကွီးပွငျးရှငျသနျလာကွသညျ့ မြိုးဆကျမြား၏ အတ်တအတှေးမြားအောကျမှ သားတျောမောငျတို့ မြိုးဆကျ၊ သူက တဈဆငျ့ ဆငျးသကျလာမညျ့ နောကျမြိုးဆကျ၊ မြိုးဆကျတို့ ကငျးလှတျပယျကှာပွီး လှတျလပျမှနျကနျ မြှတသော အယူအစှဲမြိုး ကိနျးအောငျးရနျ ကြှနျတျောတို့၏ အဖွကေ အရေးကွီးပါလားဟု တှေးမိသှားသညျ။
ထိုသို့မဟုတျဘဲ ကြှနျတျောတို့က တဈဆငျ့ ထပျမံလကျဆငျ့ကမျး အမှပေေးလိုကျမညျ့ အယူအဆ အတှေး သညျ နောငျမြိုးဆကျမြိုးဆကျမြားထိ ကူးလူးဆငျ့ကမျးသှားရငျး ပနျးတိုငျကို ကြောပေးအပွေးခိုငျးသလို ဖွဈနေ လြှငျ တကယျ့ကို စိုးရိမျဖှယျရာပငျ ဖွဈသညျ။
ကြှနျတျောကတော့ သားတျောမောငျကိုသူ့အသကျအရှယျဖွငျ့ သုံးသပျဆငျခွငျနိုငျဖှယျရှိသညျ့ ကတိလေး ပါးကငျးသော အဖွမြေိုးပေးခဲ့မိသညျ။
အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော သားတျောမောငျမေးသညျ့ မေးခှနျးကိုကွညျ့ပွီး ကြှနျတျောတို့က တဈဆငျ့ ကြှနျ တျောတို့ မြိုးဆကျကို လကျဆငျ့ကမျးပေးမညျ့ အယူအဆ၊ အတှေးအချေါ၊ ရှငျသနျကွီးရငျ့ရပျ တညျမှုသညျ အမုနျး တရားကဖယျခှားပွီး မှနျမှနျကနျကနျဆငျခွငျနိုငျသညျ့ နားလညျ နိုငျစှမျးမြိုးဖွဈမှသာ သူတို့မြိုးဆကျမြားအတှကျ ကညျြဆနျတှအေစား ပနျးမြားပှငျ့လာစမေညျမှာ အသအေခြာဟု ယူဆမိသောကွောငျ့ဖွဈသညျ။ သားတျော မောငျ၏ မေးခှနျးက ရိုးရိုးလေးပငျဖွဈသညျ။
““ဖဖေေ … ဗမာနိုငျငံဆိုပွီးရှိတယျလေ။ ဘာလို့ ရှမျးနိုငျငံ၊ ရခိုငျနိုငျငံဆိုပွီး မရှိတာလဲ။ မှနျလညျးမရှိဘူးလေ။ တခွားဟာတှလေညျး တဈခုမှမရှိဘူး။ ဘာလို့လဲ။ သူတို့က ဘယျနရောမှာ ဘယျလိုနရေမှာလဲ။ ဖဖေေ … ဖွပေါ။””
““ဖေဖေ… တိုင်းရင်းသားဆိုတာ ဘာလဲ””
ရုံးကအပြန် အိမ်ရောက်ပြီး ညစာ အတွက် ဟင်းချက်နေတုန်း မီးဖိုချောင်ထဲ ရောက်လာပြီး မေးလာသော သားတော် မောင်၏ မေးခွန်းကြောင့် ခေါင်းနားပန်းကြီး သွားမိသည်။ သားတော်မောင်က ယခုနှစ်မှ သူငယ်တန်း (ွု) စတက်သည့် အသက် ၅နှစ်ကျော် အရွယ်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းတွင် သင်ပေးလိုက်သည့် သင်ခန်းစာ၊ လေ့လာ စရာများအနက် သူထပ်မံသိလိုသည့် အကြောင်းအရာတွေ၊ အပြင်အပတွင် စူး စမ်းလေ့လာရင်း သူထပ်မံနားလည်လိုသည့် အကြောင်းအရာတွေရှိပါက ယခုလိုပင် ကျွန်တော့်ကို အမြဲမေးခွန်း ထုတ်လေ့ရှိ သည်။ တစ်ခါတလေ မေးခွန်းများက လွယ်သော်လည်း ဖြေရသူအတွက်က ဖြေရ ခက် ခေါင်းခဲရသည့် ကိစ်္စများလည်း မနည်း ပေ။ ယခုလည်း ဘယ်က ဘယ်လို ကြား သိလာသည်မသိ … အမေးတော်ရှိလာခဲ့ လေပြီ။ ယခုလို မေးခွန်းမျိုးက အဖြေ မတတ်လျှင် ကလေးစိတ်ထဲ အယူစွဲနှင့် အသိအမှားမျိုး ၀င်သွားနိုင်သည်မို့ ဘယ် လိုအဖြေမျိုးပေးရမလဲဟု အတော့်ကို စဉ်းစားရသည်။
““ဖေဖေ… တိုင်းရင်းသားဆိုတာ ဘာလဲ၊ ပြောပြပါ။””
သူ့ကိုအဖြေမပေးတော့ စိတ်မရှည် ဟန်ဖြင့် သားတော်မောင်က ထပ်မေးလာ သည်။
““တိုင်းရင်းသားဆိုတာ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်းပေါ့ သားရဲ့။””
ကျွန်တော့်အဖြေကြားတော့ သား တော်မောင် နည်းနည်းစဉ်းစားသွားဟန် ရှိသည်။ ယခင်ဆိုဆက်တိုက် ချက်ချင်း နောက်ဆက်တွဲ မေးခွန်းတွေ တရစပ် မေး တတ်သော်လည်း ယခုတစ်ခါတော့ အနည်း ငယ် တုံ့ဆိုင်းသွားသည်။ ကျွန်တော်လည်း မသိသလိုဟန်ဆောင်ရင်း ချက်လက်စ ဟင်းကို ဆက်ချက်နေမိသည်။ သို့သော် သားတော်မောင် ခေတ်္တတုံ့ဆိုင်းသွားမှုက မုန်တိုင်းမလာမီ လေငြိမ်နေခြင်းမျိုးဆိုတာ ကို မတွေးခဲ့မိခြင်းက ကျွန်တော့် အမှားပင်။
““ဖေဖေ.. သားသားတို့ကဘာလဲ။ ဘာတိုင်းရင်းသားလဲ””
““ဖေဖေတို့က ဗမာတိုင်းရင်းသား ပေါ့ … သားရဲ့။ ဗမာဆိုတာကလည်း တိုင်း ရင်းသားတစ်မျိုးပဲလေ””
““ရှင်ကလည်း ကလေးကို မဟုတ်တာ တွေလျှောက်ပြောနေပြန်ပြီ။””
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် အမေး အဖြေကို နားထောင်နေသည့် အိမ်သူက သားတော်မောင်ကို ကျွန်တော်ပေးလိုက် သည့် အဖြေကို မကျေနပ်ဟန်ဖြင့် ၀င် ပြောလာသည်။
““ကလေးကို အမှန်အတိုင်းပဲ ပြောရ မယ်လေ။ ဒါမှ သူမှန်မှန်ကန်ကန် နားလည် မှာပေါ့။ ဒါက လက်လွတ် စပယ်ဖြေလို့ မရဘူးလေ။””
အိမ်သူနားလည်အောင် ကျွန်တော် ရှင်းပြရသည်။ ဒီအရွယ်ကတည်းက ကျွန် တော်တို့ မျိုးဆက်ကို ကျွန်တော်တို့အမှန် သိစိတ်ကို မျိုးစေ့ချပေးရန် လိုအပ်သည်ဟု ကျွန်တော်ကယူဆထားသည်။
သားတော်မောင်က ထပ်မေးလာ သည်။ သားတော်မောင်က သူသိချင်တာကို မနားတမ်းမေးတတ်သည်။ တစ်ခါတလေ တော်တော် လေးရှင်းပြရခက်သည်။ ဥပမာ- ““ခခွေးကို မြန်မာလို ဘယ်လိုခေါ်လဲ ဖေဖေ”” ဆိုတာမျိုးဖြစ်သည်။ နားလည်အောင် မနည်းရှင်းပြရသည်။ ခုလည်း ဗမာနိုင်ငံ ဆိုတာ ဘာလဲ မေးလာပြန်သည်။
““ဗမာနိုင်ငံဆိုတာဖေဖေတို့ ခုနေတဲ့ နိုင်ငံကိုခေါ်တာပေါ့ သားရဲ့။””
““အတူတူပဲလေသား၊ သားသားကြိုက် သလိုခေါ်ပေါ့။””
““မတူပါဘူး။ ဗမာက B နဲ့ပေါင်းတာ လေ။ ဟိုဟာက M နဲ့ပေါင်းတာ၊ မတူ ပါဘူး။””
““ပစ်ရင်မိုးပေါ်ထောင်မပစ်ဘူး။ တည့် တည့်မှန်အောင် ပစ်တယ်””ဆိုသည့် ပုဂ်္ဂိုလ် ကြီး အစပြုခဲ့သည့် ပြဿနာက ယခုကိုယ့် အိမ်ထဲက ကိုယ့်သားတော်မောင်ထိပါ ရောက်လာနေခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ကမ်္ဘာကျော် ကဗျာ ဆရာတစ်ဦး၏ စကားတစ်ခုမှတ်သား ခဲ့ဖူးသည်။ နှင်းဆီကို မည်သို့နာမည်ပေးပေး နှင်းဆီသည် နှင်းဆီဟု ဆိုသည်။ မူလရှိ ရင်းစွဲအဓိပ်္ပာယ်ကို စကားလုံးတွေ ပြောင်း လဲလိုက်ရုံဖြင့် ပြောင်းလဲသွားမည်ဟု ယူဆ ထင်မြင်ကြသူတို့၏ အကျိုးဆက်က ယခု ကိုယ့်အိမ်ထဲထိ ရောက်လာပြီး ကိုယ့်မျိုး ဆက်ထိ ရောက်လာနေခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သား တော်မောင် ယခုလိုမေးတော့ မထင် မှတ်ဘဲ လွှတ်တော်ထဲက စစ်ဘေးရှောင်ဟု မခေါ်ဘဲ တိုက်ပွဲရှောင်ဟုခေါ်ရန် အသိ ပေးချက်ကို ဖျတ်ခနဲသတိရရင်း ပြုံးမိသေး သည်။ ကိုယ့်မျိုးဆက်၏ အတွေးထဲကို ကျွန်တော်တို့ မလိုအပ်တာတွေ မထည့်မှ ဖြစ်မည်။
““ဖေဖေ …မေးနေတယ်၊ B နဲ့ M နဲ့မတူဘူးမို့လား။””
မေးတာကိုဖြေရန် ကြန့်ကြာနေသဖြင့် စိတ်မရှည်သလို သားတော်မောင်က မေးလာသည်။
““စာလုံးပေါင်းပဲမတူတာသားရဲ့၊ အဓိပ်္ပာယ်ကအတူတူပဲလေ။ မေမေကို မေ မေလို့ ခေါ်သလို မာမီလို့လည်း ခေါ်သလို ပေါ့သားရဲ့။””
““ဒါဆို… ရခိုင် (R သံဖြင့်အသံထွက် ရင်းပြော)လည်း ရခိုင် (ရကောက်သံဖြင့် အသံထွက်ရင်း)နဲ့ အတူတူပဲလား။””
““အေးပေါ့… အတူတူပဲပေါ့ သားရဲ့။””
““ဖေဖေ… သားသားတို့က ဘာလုိ့ တိုင်းရင်းသားလဲ၊ တခြားသူတွေကရော ဘာလို့ တိုင်းရင်းသားလဲ။””
““ဗုဒေ်္ဓါ””ဟုသာ ဘုရားတမိတော့သည်။ သားတော်မောင်ကို တခြားနာမည်ပေးခဲ့ မိ၍သာ တော်တော့၏။ မောင်လူအေးဟု သာ နာမည်ပေးမိလျှင် (ဆရာ)သိပ်္ပံမောင်ဝ ကို ရောက်ရာအရပ်က ပြန်ခေါ်နိုင်ရန် ဟိုမြစ်ထဲခေါင်းလောင်းရှာသည့် အဖွဲ့ကို အကူအညီတောင်းခံရမည့်ပုံပင် ဖြစ်သည်။
““ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဖေဖေတို့အားလုံး က သူငယ်ချင်းတွေမို့လို့ပေါ့သားရဲ့။ သားသားလည်း တိုင်းရင်းသား၊ သားသား သူငယ်ချင်း တွေလည်းတိုင်းရင်းသား။ အားလုံးက သူငယ်ချင်းတွေပေါ့ သားရဲ့။””
““တိုင်းရင်းသားတွေက ဘယ်မှာနေတာ လဲ ဖေဖေ။””
သားတော်မောင်သည် တိုင်းရင်းသား ဆိုသည်ကို သူသိထားသည့် အြေငသညေူါနသါမစေ့ငခ ထဲက အကောင်တွေ သူ့နေရာနှင့် သူကျင်လည် ကျက်စားနေထိုင်မှုမျိုးရှိသည် ဟု ထင်မှတ်ထားပုံရသည်။ ခက်သည်က အိမ်မှာလည်း မြန်မာပြည်မြေပုံ ၀ယ်ယူ ချိတ်ဆွဲထားခြင်းမရှိသည်မို့ တိုင်းရင်းသား တွေ မည်သို့မည်ပုံ မည်သည့်နေရာတွင် နေထိုင်ကြောင်းကို ရှင်းပြဖို့ ခက်နေခဲ့သည်။ ဟင်းကလည်းချက်ရင်းတန်းလန်းမို့ ဘယ် လိုရှင်းပြရမလဲ ကြံရာမရ ဖြစ်နေတုန်း အတွေးပေါ်လာသည်နှင့် ဂူဂဲလ်ကနေမြန်မာပြည်မြေပုံဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီး တိုင်းရင်းသား တွေ နေထိုင်ရာဒေသနှင့် သူတို့အမှီပြုရာ အရပ်တွေကို ပုံနှင့်တကွပြရင်း ရှင်းပြလိုက် တော့ သားတော်မောင် တော်တော်လေး ကျေနပ်သွားသည်။ သို့သော် သားတော် မောင်ကို တစ်သမတ်တည်း အယူစွဲ ဖြစ်မ သွားစေလိုတာကြောင့် ထပ်မံရှင်းပြမိသည်။
““ဒါတွေက တိုင်းရင်းသားတွေ သူတို့ မူလနေတဲ့ နေရာတွေပေါ့ သားရဲ့။ ဒါပေမယ့် ဖေဖေတို့အားလုံးက တိုင်းရင်း သားတွေလေ။ ဖေဖေတို့နိုင်ငံထဲမှာ နေချင်တဲ့နေရာကို သွားလာနေထိုင်လို့ ရတာပေါ့ သားရဲ့။””
ကျွန်တော့်အဖြေကို ကြားတော့ သားတော်မောင်က နည်းနည်းစဉ်းစားသွား သည်။ ပြီးတော့ မေးခွန်းတစ်ခုထပ်မေး သည်။ သားတော်မောင် ထပ်မေးသည့် မေးခွန်းကြားတော့ အံ့သြမှင်တက်သွားမိ သည်။ ထို့အတူ နှစ်ပေါင်းများစွာ ၀ါဒ မှိုင်းတွေအောက် နစ်မြုပ်ရင်း အမုန်းတရား များဖြင့် ကြီးပြင်းရှင်သန်လာကြသည့် မျိုးဆက်များ၏ အတ်္တအတွေးများအောက်မှ သားတော်မောင်တို့ မျိုးဆက်၊ သူက တစ်ဆင့် ဆင်းသက်လာမည့် နောက်မျိုး ဆက်၊ မျိုးဆက်တို့ ကင်းလွတ်ပယ်ကွာပြီး လွတ်လပ်မှန်ကန် မျှတသော အယူအစွဲမျိုး ကိန်းအောင်းရန် ကျွန်တော်တို့၏ အဖြေက အရေးကြီးပါလားဟု တွေးမိသွားသည်။
ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ ကျွန်တော်တို့က တစ် ဆင့် ထပ်မံလက်ဆင့်ကမ်း အမွေပေးလိုက် မည့် အယူအဆ အတွေးသည် နောင်မျိုး ဆက်မျိုးဆက်များထိ ကူးလူးဆင့်ကမ်းသွား ရင်း ပန်းတိုင်ကို ကျောပေး အပြေးခိုင်းသလို ဖြစ်နေလျှင် တကယ့်ကို စိုးရိမ်ဖွယ်ရာပင် ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်ကတော့ သားတော်မောင်ကို သူ့အသက်အရွယ်ဖြင့် သုံးသပ်ဆင်ခြင်နိုင် ဖွယ်ရှိသည့် ကတိလေးပါးကင်းသော အဖြေမျိုးပေးခဲ့မိသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သားတော် မောင်မေးသည့် မေးခွန်းကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်တို့က တစ်ဆင့် ကျွန်တော်တို့ မျိုးဆက်ကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးမည့် အယူ အဆ၊ အတွေးအခေါ်၊ ရှင်သန်ကြီးရင့်ရပ် တည်မှုသည် အမုန်းတရားကဖယ်ခွားပြီး မှန်မှန်ကန်ကန်ဆင်ခြင်နိုင်သည့် နားလည် နိုင်စွမ်းမျိုးဖြစ်မှသာ သူတို့မျိုးဆက်များ အတွက် ကျည်ဆန်တွေအစား ပန်းများပွင့် လာစေမည်မှာ အသေအချာဟု ယူဆမိ သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သားတော်မောင်၏ မေးခွန်းက ရိုးရိုးလေးပင်ဖြစ်သည်။
““ဖေဖေ … ဗမာနိုင်ငံဆိုပြီးရှိတယ် လေ။ ဘာလို့ ရှမ်းနိုင်ငံ၊ ရခိုင်နိုင်ငံဆိုပြီး မရှိတာလဲ။ မွန်လည်းမရှိဘူးလေ။ တခြား ဟာတွေလည်း တစ်ခုမှမရှိဘူး။ ဘာလို့လဲ။ သူတို့က ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုနေရမှာလဲ။ ဖေဖေ … ဖြေပါ။””